Fadhigii baarlamaanka federaalka oo lagu waday in la horgeeyo R/wasaaraha cusub oo maanta baaqday. – Radio Daljir
Fadhigii baarlamaanka federaalka oo lagu waday in la horgeeyo R/wasaaraha cusub oo maanta baaqday.
Muqdisho, June 26 – Kulan la filayey in ay maanta iskugu yimaadaan golaha baarlamaanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, laguna hor-keeni lahaa R/wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa baaqday kaddib war-galin ka timid guddoonka wakiillada.
Baaqashada fadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa lagu sababeeyey u dabaal-degidda maalinta 26-ka June oo maalintii ugu horraysa oo la arko calanka Soomaaliyeed, ayna midoobeen gobollada Waqooyiga iyo kuwa koonfureed Soomaaliya.
Fadhigaan xildhibaannada ee maanta baaqday ayaa lagu waday in la horgeeyo R/wasaaraha cusub ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’ kaasoo maalmo ka hor uu magacaabay m/weyne Shariif Sh Axmed kaddib marki uu is-casilay R/wasaarihii hore Maxamed C/llaahi Maxamed ‘Farmaajo’.
Xildhibaan Cabdinaasir Gaarrane Maxamed, oo ka m id ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa sheegay fadhigii golaha wakiillada ee maanta in dib loo dhigay si loo weyneeyo maalintaas 26-ka June.
Xildhibaan ku waxaa uu carabbaabay in uu jiro hadda kala duwanaansho fakar oo xagga baarlamaanka dhexdiisa ah taasoo mudanayaasha wakiillada qaarkood ay qabaan in marka hore golaha la geeyo qoddobadkii heshiiskii Kampla kaddibna loo gudbo meel-marinta R/wasaaraha.
Mudane Gaarrane, waxaa uu Daljir u sheegay baarlamaanka ahaan in ay ku han-weynyihiin meel-marinta R/wasaaraha cusub, ayna ku kalsoon yihiin wax-qabadkiisa iyo dadaalladii uu muujiyey muddadii uu ka mid ahaa xukuumaddii Farmaajo.